Ilay tsara tarehy indrindra mandritra
Ny ady amin'ny pnemonia virus virus satro-boninahitra vaovao, ny mpitantana jeneraly Li Jiaxiang dia nitarika ny mpiasa rehetra tao amin'ny Huai'an Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd. hamaly ny antson'ny komity sy ny governemanta antoko antoko. Amin'ny maha-mpanamboatra maska ​​ara-pitsaboana eto an-tanànantsika fotsiny, ny ...
Mbola mampiasa savony landihazo hitsaboana ratra? Huai'an ZTE pharmaceutika "Nanambara ny fenitra momba ny lambam-pandihizana landihazo ho anao"
Amin'ny maha-entana ilaina ao an-trano azy dia tena ilaina ampiasaina ny savony landihazo, na fitaovana zavakanto izy io amin'ny fanitsiana ny antsipiriany mandritra ny makiazy, na fitaovana fanampiana ho an'ny famonoana otrikaina sy fanosehana menaka manitra mandritra ny fitsaboana ny ratra. Indrindra rehefa miatrika ratra na olan'ny hoditra eczema, mba hialana amin'ny secon ...
Saron-tava, fantaro amin'ny alàlan'ny fenitra
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-01
Amin'izao fotoana izao dia nanomboka ny ady amin'ny pnemonia ateraky ny virus coronavirus. Amin'ny maha "laharana voalohany amin'ny fiarovana" ho fiarovana ny fahadiovan'ny tena manokana dia zava-dehibe tokoa ny fanaovana sarontava izay mifanaraka amin'ny fenitry ny fisorohana ny valanaretina. Manomboka amin'ny N95 sy KN95 ka hatramin'ny sarontava amin'ny fandidiana ara-pitsaboana, mahazatra ...
Swab vita amin'ny landihazo voadio, Saron-tava medikaly fanary azo ampiasaina, Saron-tava miaina, Landihazo fitsaboana, Pad mpitsabo mpanampy, Saron-tava Antiviral,